China BEUFILLER Cross-yakabatana Hyaluronic Acid Dermal Filler Gels fekitori uye vagadziri | Beulines
Dermal fillers, inozivikanwawo seyekuzadza kumeso, makwinya mafiller kana ekuzora mafirita, inozivikanwa nenzira diki diki dzinokanganisa dzinoshandiswa kumisikidza kumeso, kuzadza makwinya uye kuwedzera vhoriyamu. zadza, chin chinazadza, nyemwerera mutsetse unozadza, kuseka mutsetse kuzadza, uye matako kuzadza, zamu kuzadza.
BEUFILLER inoteedzana nedermal fillers iyo inoumbwa neyakaganhurirwa-yakabatana hyaluronic acid kubva kune isiri yemhuka-yakavakirwa HA gel. Iyo gel iri yakajeka, isina kuchena uye inogadziriswa. kutarisa kwevechidiki.
BEUFILLER dermal filler inosanganisira matatu mamodheru, iwo Derm, Derm Yakadzika, Derm Plus. Mhando dzakasiyana dzematehwe ekuzadza dzakagadzirirwa kurapa akasiyana zviratidzo zvekukwegura.
Kukakavara kweBEUFILLER dermal kuzadza
1.Top mbishi zvinhu
Yakakwira mhando hyaluronic acid, isina-mhuka mavambo, 100% inogadziriswa zvigadzirwa, hapana bvunzo yeganda inodiwa, hapana kurambwa.
Zviuru zvemakiriniki ekuyera mhedzisiro zvinoratidza kuti mhedzisiro yacho ndeyechisikigo uye yakareba-inogara kana 24mg / ml
Tsono mbiri 27g / 30g kubva kuBD kambani inopihwa mahara. (1ml / 2ml)
Tsono chubhu chakagadzirwa yezvokurapa mugiredhi Glass.Graduated chubhu dzakakwirira yakajeka uye yakaoma sterilizaition, nyore kuti ishande.
Sirinji plunger, tsono hubvu, tsono cap inogadzirwa neyekurapa giredhi PP zvinhu zvinoenderana neUSP Kirasi yechina uye ISO mirau.
Separate pacakaging, inovimbisa zvachose chigadzirwa pasina kusvibiswa.
Zvinodikanwa zvekushanda: 1. Gamuchira chete chiremba wezvehutano mumasangano ekurapa anotenderwa nenyika.
2 .Chikamu chakasiyana shandisa chakasiyana chinhu.
3. Zvakanyatsoenderana nezvinodiwa muchigadzirwa.
Asati Arapwa 1.Guest haifanire kuronga chero nzira dzinokanganisa, kurapa kwekuzora ne laser, ultrasound, peels, facials kana micro- dermabrasion kwemasvondo maviri pamberi kana mushure mekurapwa neBeufiller.
2.Iyo inokurudzirwa kurega kushandiswa kweAspirin, Motrin, Gingko Biloba, Garlic kana chero imwe yakakosha fatty acids kanenge mazuva matatu kusvika 1 vhiki pamberi uye mushure mekurapwa kuti kuderedze kupwanya kana kubuda ropa.
3.Dzivisa doro, caffeine, Niacin yekuwedzera, yakanyanya-sodium chikafu, yakawanda shuga chikafu, yakanatswa macarhydrate, zvinonhuwira chikafu uye fodya 24-48 maawa usati uye mushure mekurapa kwako. Izvi zvinhu zvinogona kubatsira mukuwedzera kuzvimba kana kutsamwa.
Mushure mekurapa 1.Usaita, bata, pusha, pusha, kana kushandisa nzvimbo dzakaisirwa kwemaawa matanhatu mushure mekurapwa.
2.Avoid yakasimba kusimbisa muviri, zuva uye kupisa kupisa kwemazuva matatu mushure mekurapwa.
3.Avoid kunyudza musoro pasi pemvura kwemaawa makumi maviri nemana akazara; izvi zvinosanganisira madziva, gungwa, bhati, hot tub, nezvimwe.
Fekitori yedu ine makore makumi maviri ekugadzira ekutsanangudza pane hyaluronic acid dermal filler, uye ine makore anopfuura gumi zviitiko paoem.we tine hunyanzvi dhizaini dhizaini kuti ikubatsire iwe kugadzirisa yako logo, yako kurongedza, ita yako pfungwa yekuvandudza yako wega mhando pesheni!
2.Strict yekiriniki bvunzo
Mubvunzo: Ndinogona here kuva nemuenzaniso?
A: Ehe, chokwadika, sampuro inowanikwa, kazhinji isu tinobhadharisa hwaro mutengo wechigadzirwa uye zvakare nekutakura mutengo.Uye kune mamwe marudzi, Sampuli yemahara, iwe unongoda kubhadhara mutengo wekutakura!
Mubvunzo: Kana ndikaraira huwandu hwakawanda, iwe unopa chero mutengo mutengo?
A: Ehe, isu tinokupa iwe mutepfenyuro zvichibva pauwandu hwako. Kana iwe uchinge waodha, iwo wakaderera mutengo.
Mubvunzo: Une imwe pasuru here? Nekuti ini handidi pasuru yaunopa izvozvi.
A: Hongu, isu tiri fekitori yeOEM, tinogona kugamuchira tsika.Tichazivisa vamwe kwauri kutanga.Ungatumirawo mapakeji mapikicha iwe aunofarira kwatiri, isu tinoshandura pasuru yacho sekukumbira kwako.
A: Fekitori yedu ine makore makumi maviri nhoroondo.Tine zvakanyanyisa mhando kudzora system mune yedu yekugadzira process.Zvose zvakasvibirira zvekutenga uye yekugadzira mhando kutonga zviri kunyatso kutevera iyo ISO 13485 manejimendi system. Kunze kwezvo, iyo yakazara-inoonekwa yekuona michina uye GMP yemhando manejimendi sisitimu yekupa yakasimba kwazvo vimbiso yemhando yepamusoro chigadzirwa.
Mubvunzo: Zvakadii nezve mushure mekutengesa sevhisi?
A: Tine Dhipatimendi rekutengesa rekushandira vatengi! Kana iwe uchida kuve nechero dambudziko nezve iyo odha, unogona kutibata nyore isu newhatsapp, E-mail, Skype kana runhare chero nguva!
Pashure: BEUFILLER hyaluronic asidhi Lip Filler